သတို့သား (၆၁)နှစ် နှင့် သတို့သမီး (၁၆)နှစ် တို့၏ သဲဂုဏ်ရွာက မင်္ဂလာပွဲ…0 – Alanzayar
သတို့သား (၆၁)နှစ် နှင့် သတို့သမီး (၁၆)နှစ် တို့၏ သဲဂုဏ်ရွာက မင်္ဂလာပွဲ…0
သတို့သား (၆၁)နှစ် နှင့် သတို့သမီး (၁၆)နှစ် တို့၏ သဲဂုဏ်ရွာက မင်္ဂလာပွဲ
ဒီသတင်းလေးကတော့ ကြားရသူတိုင်းအဖို့ ထူးဆန်းနေမှာ အမှန်ပါပဲ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သတို့သားရဲ့ အသက်အရွယ်က သတို့သမီး၏ အသက်ထက် လေးဆနီးပါးခန့် ပိုကြီးနေသောကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်. . .။
သူတို့နှစ်ဦးဟာ ဆိုရင်ဖြင့် ဖူးစာ နက္ခတ်ဆုံပီး ၁.၁၂.၂၀၂၁ ရက်နေ့က ဟိုပင် သဲဂုဏ်ရွာမှာ မင်္ဂလာပွဲ ဆင်နွှဲခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်…။
ဖူးစာများ ဆုံချင်ပီဆိုရင် ဘယ်လိုမှ ပြေးမလွတ်တာ အမှန်ပါပဲဗျာ…။
ထူးဆန်းစွာ ဖူးစာဆုံခဲ့ကြတဲ့ ဒီလင်၊ ဒီမယား အိုအောင် မင်းအောင် ပေါင်းသင်းနိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်…။ လူပျို၊ အပျို ကြီးတွေလဲ ဇွဲမလျှော့ကြပါနဲ့။ တစ်နေ့တော့ ကိုယ့်ရဲ့ဖူးစာရှင် ရောက်လာမယ်ဆိုတာ… သေချာပါတယ်ဗျာ…။crd
သူတို့နှစ်ဦးဟာ ဆိုရင်ဖြင့် ဖူးစာ နက္ခတ်ဆုံပီး ၁.၁၂.၂၀၂၁ ရက်နေ့က ဟိုပင် သဲဂုဏ်ရွာမှာ မင်္ဂလာပွဲ ဆင်နွှဲခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်…။ ဖူးစာများ ဆုံချင်ပီဆိုရင် ဘယ်လိုမှ ပြေးမလွတ်တာ အမှန်ပါပဲဗျာ…။
တို့သား (၆၁)နှဈ နှငျ့ သတို့သမီး (၁၆)နှဈ တို့၏ သဲဂုဏျရှာက မင်ျဂလာပှဲ
ဒီသတငျးလေးကတော့ ကွားရသူတိုငျးအဖို့ ထူးဆနျးနမှော အမှနျပါပဲ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ သတို့သားရဲ့ အသကျအရှယျက သတို့သမီး၏ အသကျထကျ လေးဆနီးပါးခနျ့ ပိုကွီးနသေောကွောငျ့ ဖွဈပါတယျ. . .။
သူတို့နှဈဦးဟာ ဆိုရငျဖွငျ့ ဖူးစာ နက်ခတျဆုံပီး ၁.၁၂.၂၀၂၁ ရကျနကေ့ ဟိုပငျ သဲဂုဏျရှာမှာ မင်ျဂလာပှဲ ဆငျနှဲခဲ့ကွတာ ဖွဈပါတယျ…။
ဖူးစာမြား ဆုံခငျြပီဆိုရငျ ဘယျလိုမှ ပွေးမလှတျတာ အမှနျပါပဲဗြာ…။
ထူးဆနျးစှာ ဖူးစာဆုံခဲ့ကွတဲ့ ဒီလငျ၊ ဒီမယား အိုအောငျ မငျးအောငျ ပေါငျးသငျးနိုငျကွပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျ…။ လူပြို၊ အပြို ကွီးတှလေဲ ဇှဲမလြှော့ကွပါနဲ့။ တဈနတေ့ော့ ကိုယျ့ရဲ့ဖူးစာရှငျ ရောကျလာမယျဆိုတာ… သခြောပါတယျဗြာ…။crd
သတို့သား (၆၁)နှဈ နှငျ့ သတို့သမီး (၁၆)နှဈ တို့၏ သဲဂုဏျရှာက မင်ျဂလာပှဲ
သူတို့နှဈဦးဟာ ဆိုရငျဖွငျ့ ဖူးစာ နက်ခတျဆုံပီး ၁.၁၂.၂၀၂၁ ရကျနကေ့ ဟိုပငျ သဲဂုဏျရှာမှာ မင်ျဂလာပှဲ ဆငျနှဲခဲ့ကွတာ ဖွဈပါတယျ…။ ဖူးစာမြား ဆုံခငျြပီဆိုရငျ ဘယျလိုမှ ပွေးမလှတျတာ အမှနျပါပဲဗြာ…။
“ရာမ” ဟာ “မယ်သီတာ” ကို တကယ် ချစ်ခဲ့တာလား??? ရာမမင်းသားဟာ မယ်သီတာကို ဘယ်တုန်းကမှ မချစ်ခဲ့ဖူးပါa
တချို့လူတွေရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ သစ္စာတရားက တည်မြဲလွန်းလို့ ကို ကံတရားကြီးကတောင် သဝန်တိုမိသွားတယ်ထင်ပါရဲ့
Previous Article အိမ်၌ရှိစဉ်အခါက အမြဲတမ်း ရန်ဖြစ် စကားများနေပြီး ညီမလေးက မင်္ဂလာဆောင်ပြီး ယောကျာ်းနောက် လိုက်သွားရတော့မည် ဆိုသောအခါ….
Next Article အလုပ်လုပ်ဖို့ ပျင်းရိနေတဲ့ သူတွေအတွက် ဂျပန်လူမျိုးတွေကျင့်သုံးတဲ့ နည်းလမ်းကောင်းလေး